MAQAAL:-Waxba Ugama Baahnin Cadawgeenna! | News From Somalia
Marka laga hadlayo faqriga iyo dalalka uu dilooday ee caalamka ku nool waxaa kaalimaha ugu horeeyay kaga jira wadanka Soomaaliya.
Sidoo kale marka dib loo milicsado dalalka uu hareeyay Musuq maasuqa Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka hogaanka u haya.
Labadaasi jago ee loo magacaabay Soomaaliya waa kuwo been abuur ah oo aanay shaqo ku lahayn, waana war la iska qoray oo aan loo eegin xaqiiqada dhulka ka jirta.
Ururrada siyaasadda, arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ayaa Soomaaliya u aqoonsan meel liidata oo aanay dadka joogaahi wuxuush ama duur jog waxba dhaamin.
Dadka sidaasi aaminsan ma aanay arkin hoosna uma gelin dhaqanka wanaagsan ee Muslimiinta Soomaaliya iyo aqlaaqda ay leeyihiin.
Soomaaliya marka aad tahay qof dhulka ku safraya waxaad la kulmaysaa waxyaabo badan oo indhahaaga iyo qalbigaagu ku farxaan.
Dadka ayaa ah kuwo si buuxda u iimaansanaya waxa Allaah ku manaystan oo diin iyo hanti ah, gaar ahaan kuwa ku sugan wilaayaatka Islaamiga ah mana arkaysid qoys xitaa hadii hantidoodu yartahay dhaliilsan oo waxaa ay ku qanacsanyihiin xukunka Allaah ee ah in hantidoodu intaasi la ekaato.
Soomaaliya marka dib looga soo xisaabiyo xilligii xukuumadii Militariga ee Siyaad Barre ilaa hadda waxaa hogaaminayay dad aan diin iyo caqli midna u saaxiib ahayn ilaa laga soo gaaro xilliyadii Maxaakimta iyo hadda oo wilaayaatka Soomaaliya qaybo badan oo kamid ah Towxiid dhab ah looga dhaqmo.
Gaalada iyo dalalka Shisheeye sawirka kaliya ee u muuqanayay ayaa ahaa kuwo diin Islaamna ka tegay tii gaaladana ku sirmay oo jaho wareersan oo iyaga u shaqeeyan una una kala dhuumanaya.
Waana arinkaasi mida keentay in sawir xun laga aamino Soomaaliya iyo xaalka ay ku sugantahay.
Tijaabooyin la qaaday kadib ayaa waxaa lagu ogaadya in umadda Soomaaliyeed aanay Faqri ahayn kana ak dhoweyn welibana ay baahideedu aad u yartahay marka loo bar bar dhigo umadaha kale ee aan Islaamka ahayn.
Soomaalidu waa Muslimiin Insha`allaah marka guud ahaan umadda laga hadlo oo diinta xaqqa ah ee Allaah raaliga ka yahay ayay haystaan.
Marka labaad waa dad ku qanacsan waxa yarka ah ee ay haystaan,qoyska Soomaaliga ah ayaa waxaa ku filan beer la beerto mida ugu yar, kan reer guuraaga ah ayaa waxaa ku filan rati biyaha u dhaamiya iyo dhowr ari ah oo xitaa ka yar 60 neef.
Qiyaasta aan sameeyay waxaa laga yaabaa inay ka badalntahay waaqaca jira laakiin muhiimadda aan ka leeyahay ayaa ah in dadku ay dagaan dhanka qalbiga ah qabaan oo aanay faqri qalbi iyo mid kaleba qabin xoogaaga yarka ah ee Alle siiyayna ay ku filanyihiin.
Kan reer magaalka ah ayaa qoyska ugu badan waxaa maalintii ku filan marka qiimaha caadiga ah laga soo qaado wax ka yar 100 kun Sh/so hadiiba aanay ka yarayn mararka qaar.
Xilligii ay Soomaaliya abaaruhu ku dhifteen Soomaaliya, Mujaahihiintu waxaa ay fureen xeradah Aala Yaasir eek u taalay garoonka No Konton ee gobolka Sh/hoose.
Xeradaasi ayaa waxaa lagu quudin jiray wax ka badan 5000 kun oo qoysas soo barakacay ah.
Xeradaasi inta ay furnayd wax laga sheekeyn karo ma ahan nidaamka kala dambeynta halkaasi ka jirta iyo habka raashinka gargaarka ah loogu qaybinayay.
Nidaamka xeradaasi loo agaasimayay iyo habka raashinku u kala gaarayay dadkaasi waxaa ay meesha ka saartay shaatigii masamiirta Soomaali lagula dhejiyay ee Musuq maasuqa.
Dhanka kale tirada dadka halkaasi ku jiray marka la eego gobolladii ay ka yimaadeen xilligaasi oo ahaa xilli aad u liita waxaa ay ahaayeen tiro aad u yar waxaana qoys walba ku filaaday raashin iyo lacag aad u yar oo maalin walba loo qoondeeyay taasi oo qoysaska aad ugu filnaatay Allaah mahadii.
Dhaqaalahaasi ayaa ka imaan jiray gudaha dalka iyo dibaddiisa oo dad Muslimiin ah ayaa walaalahooda ugu hagar baxay inay baahida haysa uga gar gaaraan.
Sidoo kale taasi ayaa waxaa ay meesha ka saarta in dadka Soomaalidu ay badi ahan yihiin dad sabool ah oo aan gar gaar lala kala gaarin.
Intii xeradaasi furnayd waxaa xusuus ah in aanay ka dhicin wax shaqaaqo ah nuucay doonto ha ahaatee.
Gaalada caalamka ayaa arinkaasi si aad ah uga yaabay iyadoo la xusuusto warbaahinta reer galbeedka inay booqasho ku yimaadeen si ay xaalka wax badan uga ogaadan.
Warbaahintaasi inkastoo cadow uu leeyahay hadana waxaa ay qarin waayeen nidaamka Diinka Islaamka ku dhisan ee halkaais ku ka jiray.
Dowladdii Shariif oo muraara dilaacsan iyo hey`adihii dalka laga saaray ayaa furay aag dagaal oo ka dhan ah nidaamka Mujaahidiintu ay u wajahayaan samatabixinta dadka waxaana ay fureen xero qaxooti oo loogu magacdaray Badbaado.
Kadib maxaa dhacay? Dadku sida dabeecadda ah xitaa hadii aanay baahnayn waxaa ay jecelyihiin inay helaan raashin ama lacag bilaash ah.
Waxaa halkaasi gaaray qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo xilligaasi iska tabaalaysnaa, kuwaasi oo dhegta ku hayay waxa wanaagga ah ee ka jiray Aala Yaasir.
Dadkaasi lagu soo jiita xayaysiinta xeradaasi Badbaado ma ahayn dad sidaasi wacyi gelin wanaagsan uga haysta qiyaanada gaalada waxaana markii halkaasi ay gaareen ay la kulmeen. Dhac dil Kufsi iyo xarig.
Ciidanka dowladda ayaa si bareer ah u kufsan jiray gabdhaha Muslimaadka ah ee halkaasi ku soo barakacay, waxa yar ee la siiyana way ka qaadan jireen ilaa ay arintu gaarto in warbaahintii gaalada ee wanaagga Aala Yaasir tabisay ay ugu dambeyn tebiyaan xaalad murugo iyo madax xanuun badan oo ka jirta xerada Badbaado oo dowladdu sheegtay inay dadka ku quudinayso.
Dadkii Badbaado lagu qiyaanay ayaa ugu dambeyntii dib halkaasi kaga cararay iyaga oo tiro badan oo ka tirsan lagu soo dhoweeyay Ceelasha Biyaha kadibna loo gelbiyay Aala Yasir.
Xerada Aala Yaasir ayaa mudo kadib albaabada loo laabay kadib roobab xoogan oo ku dhiftay guud ahaan Soomaaliya si loo dhiiri geliyo in dadku wax qabsadaan islamarkaana aanay ugu tashan gacan kale.
Maamulka Mujaahidiinta ee maaraynta iyo samatabixinta dadka eek u dhisan shareecada Islaamka ayaa gebi ahaanba quusisay islamarkaana meesha ka saartay hadal suuqeedkii cadowga ee ahaa inaan Soomaaliya isku filnayn.
Iyadoona hal hayska dadku noqday WAX UGAMA BAAHNIN CADAWGEENNA!!!
Si kastaba ha ahaatee duruustii laga bartay xerada Aala Yaasir ayaa noqotay mid buugaagta cilmiga ee tajrubooyinka lau qoro waxaana shaqsiyan halkaasi aan ka bartay qaabka loo maareeyo umadda iyada oo aan lagu xirnayn hay`ad gaal amaba dalal shisheeye.
This entry was posted in Afgooye iyo Balcad, Amisom, Ashahaado la dirir!, Baarlamaanka, Banaadir Post, CRD SOMALIA, Culumo Suu, DAMMU JADIID, Dastuur Daaquud, Dowlada Fewderaalka, Hassan Sheekh Mahamud, Isbaaro-Jidgooyo, ITOOBIYA, Kenya-Somalia, Maali, Maleeshiyaadka ALPHA, Maleeshiyo Beeleed, Neo-colonialism, QAADKA, Shabeelada Dhexe-Jowhar, Shabeelada Hoose, Somali Media, Somalia, Xarakatul Shabaabul Mujaahidiin, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida!!, Xerada Qaxootiga Badbaado and tagged Alshabaab, Amisom, Ashahaado la dirir, Banaadir Post, Moqdisho, News From Somalia, Somalia, Ugandha, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida!!. Bookmark the permalink.